Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Boeing 737 MAX nodiovina hanidina amin'ny habakabaka indiana indray
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Hatreto dia firenena 175 amin'ny 195 no nanafoana ny fameperana an'i Max, ary mpandraharaha maherin'ny 30 no namerina ny fiaramanidina ho amin'ny asany.
Mpanara-maso fiaramanidina sivily indiana tsy mandeha amin'ny fiaramanidina Boeing 737 MAX.
SpiceJet dia manantena ny hanombohana ny asa Boeing 737 MAX amin'ny volana ambony.
India nametraka fiaramanidina MAX 737 tamin'ny 13 martsa 2019.
Nanambara ny mpandrindra ny sidina sivily India androany fa navela hiasa amin'ny habakabaka indiana indray ny fiaramanidina Boeing 737 MAX.
Ny fiaramanidina Boeing 737 MAX rehetra dia niorina manerantany tamin'ny martsa 2019 taorian'ny fianjerana roa tao anatin'ny 5 volana.
Noraran'ny India ny sidina MAX rehetra tsy hanidina, avy, ao anaty sy amin'ny habakabaka Indiana ny 13 martsa 2019.
Vao tsy ela akory izay, ireo fiaramanidina ireo dia navela hisidina indray avy amin'ny mpanelanelana fiaramanidina sivily any Etazonia, EU, UEA ary firenena hafa - taorian'ny fanatanterahana ny fanovana ilaina amin'ny fiarovana sy ny fanavaozana ireo fitaovana sy rindrambaiko ilaina ho fiarovana.
Ny SpiceJet Ltd an'ny India dia nilaza fa ny alakamisy dia manantena ny fiaramanidina 737 MAX an'ny Boeing Co hiverina hiasa amin'ny faran'ny volana septambra taorian'ny fifanarahana natao tamin'i Avolon izay nampanofaina tamin'ny fampanofana ireo fiaramanidina.
SpiceJet - ny hany mpitatitra karana mitondra B737 Max any India - niditra tamina sefom-pokontany niaraka tamin'ny Avolon, mpampindram-bola lehibe MAX, nanokatra ny làlana ho an'ny fiaramanidina 737 MAX an'ny kaompaniam-pitaterana hanomboka hiverina hiasa… tamin'ny faran'ny volana septambra 2021, “lohahevitra amin'ny fankatoavana ara-dalàna. ”
Raha atambatra, nisy fiaramanidina Boeing 737 Max valo ambin'ny folo tany India - Jet taloha ary 13 an'ny SpiceJet - tamin'ny fotoanan'ny fitotofana.
Ilay mpamatsy vola an'arivony karana, Rakesh Jhunjhunwala, dia mikasa ihany koa ny hanangana kaompaniam-piaramanidina lafo vidy amin'ny faran'ny taona ho avy miaraka amin'ny sambo B737 Max. Ex-Jet Max dia navoakan'ny tsy ampy taona.
India Direktorat jeneralin'ny fiaramanidina sivily (DGCA) ny lehiben'ny Arun Kumar dia namoaka didy hanafoanana ny fametrahana ny volana martsa 2019 an'ny B737-8 / 9 MAX androany.
"Ity fanavotana ity dia mamela ny fiasan'ny fiaramanidina Boeing Company Model 737-8 sy ny Boeing Company Model 737-9 (MAX) raha tsy misy afa-tsy ny fahafaham-po amin'ny fangatahana miverina amin'ny serivisy," hoy i Kumar.
Tany am-piandohan'ny volana aprily, ny DGCA dia namela ny fiaramanidina Boeing 737 Max voasoratra anarana avy any ivelany izay nalefa tany India hiala ny firenena. Izy io koa dia namela ny fandefasana tafahoatra ny Max novaina mihoatra ny habakabaka Indiana.
Taorian'izany dia nisy fiaramanidina vahiny voasoratra anarana niantsona tany amin'ny seranam-piaramanidina isan-karazany any India afaka nanao RTS.
Tao anatin'ny fanambarana iray dia nilaza i Boeing fa: "Ny fanapahan-kevitry ny DGCA dia dingana lehibe iray hamerenana amin'ny laoniny ny 737 MAX am-pilaminana any India. Boeing dia manohy miara-miasa amin'ireo mpanara-maso sy ny mpanjifantsika hamerina ny fiaramanidina hiasa manerantany. ”